Ukuba uyakhohlisa ukuba ingxoxo yakho ingumntu, undwendwe lwakho luya kuyifumana kwaye uya kulahla ukuthembela kwabo. Ukuba uza kudinga uncedo lwe-bot, vumela undwendwe lwakho lwazi ukuba ziyi-bot.
Uninzi lwamaqonga eengxoxo kunzima ukusebenzisa. Ngelixa amava abo ajongene neendwendwe kunokuba mahle, amandla okwakha kunye nokuhambisa i-bot eluncedo luphupha. Ndiyazi… Ndingumfo wezobuchwephesha oziinkqubo kwaye andikwazi ukufumana ezinye zezi nkqubo.
Nantsi imbonakalo epheleleyo ... Isikhokelo sokuGqibela seNtetho:
tags: umanyanisoBotingxoxouyilo lwengxoxoUkucwangciswa kwengxoxondincokola uichatbot ujongano lomsebenzisiumongoingxoxouyilo lwencokoUmgaqo wokubambisanafacebook umthunywai-landbot